Olee Otú M Pụrụ Naghachi Data mgbe Disk Hichapụ
> Resource> Naghachi> Olee Otú M Pụrụ Naghachi Data mgbe Disk Hichapụ
Enwere m ike Naghachi Data si kpochapụrụ Disk?
Hi niile, m na mberede kpochapụrụ m ike mbanye na ugbu a, m nchegbu na Aga m ga-esi m collection nke music na foto na na draịvụ ike azụ ọzọ. Bụ n'ebe ọ bụla otú ahụ ka m nwere ike naputa data si kpochapụrụ disk? Onye biko nyere m aka!
Atụla kwa-echegbu onwe unu. Isiokwu a bụ kpọmkwem ihe ị mkpa naghachi furu efu faịlụ site na a kpochapụrụ ike mbanye. Ihe bụ isi nkweta banyere faịlụ gị kpochapụrụ disk bụ na ha na-agaghị n'ezie kpochapụrụ ruo mgbe ebighị ebi. Nanị mgbe ị na-etinye ọhụrụ data na gị disk ga furu efu faịlụ na-ikekwe okụrede-adịgide adịgide. Nke a pụtara na ị chọrọ ịkwụsị iji draịvụ ike gị ma na-ngwa ngwa omume naghachi data mgbe disk ehichapụkwa.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ ihe magburu onwe kpochapụrụ disk data mgbake ịba uru maka gị. Ọ na-enye ihe dị mfe na n'ihe ize ndụ-free ngwọta iji weghachite fọrọ nke nta niile ị kwụsịrị si gị kpochapụrụ ike mbanye, gụnyere oyiyi, videos, faịlụ ederede, ọdịyo faịlụ, wdg
Ị nwere ike nweta ikpe version nke Wondershare Data Recovery omume naghachi data si kpochapụrụ disk ugbu a. N'ọnwụnwa a version-enyere gị aka iṅomi gị kpochapụrụ disk furu efu faịlụ n'ihu ịzụta zuru version naghachi ha.
Naghachi Data mgbe Disk Hichapụ na 3 Nzọụkwụ
Ugbu a, ka na-eji Windows version nke Wondershare Data Recovery ịrụ kpochapụrụ disk data mgbake.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode naghachi furu efu data si a kpochapụrụ ike mbanye
Ị ga-ahụ 3 mgbake ụdịdị mgbe malite Wondershare Data Recovery na kọmputa gị. Dị ka anyị na-aga na-agbake data si kpochapụrụ disk, ka họrọ "nkebi Iweghachite" mbụ.
Nzọụkwụ 2 iṅomi partitions na gị kpochapụrụ disk
Mgbe ahụ mkpa ka ị họrọ gị kpochapụrụ disk na pịa "Next" button ịnọgide. Usoro ihe omume ga ike iṅomi partitions na na disk mgbe ahụ.
Mgbe nkebi scanning okokụre, niile partitions na gị kpochapụrụ disk ga-edepụtara. Ị dị nnọọ mkpa họrọ otu n'ime ha na pịa "Malite" ka scanning furu efu nkebi na gị kpochapụrụ disk.
Nzọụkwụ 3 Naghachi data si kpochapụrụ disk dị ka ị chọrọ
Mgbe scanning, na kpochapụrụ data na gị disk ga-egosipụta na "File ụdị" na "Ụzọ". Ị nwere ike ele faịlụ aha ego otú ọtụtụ gị furu efu faịlụ nwere ike agbapụtawo.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike nye akara faịlụ ị na-aga iji weghachite na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Biko adịghị ịzọpụta natara data azụ gị kpochapụrụ disk n'oge mgbake iji zere ime ka data overwritten.
Olee otú Naghachi Data si Virtual Disk
Olee otú Naghachi Data si floppy Disk
Olee otú Naghachi Data si ghara ịdị irè Disk
NTFS Drive Data Recovery: Olee naghachi Data si NTFS Disk
Micro SD kaadị mgbake
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si a Motorola Droid Razr
Nkwado ndabere na mpaghara weghachite Motorola Moto X na ala
Data Recovery Maka Mavericks: Naghachi Lost Data na Mac OS X 10.9 (Mavericks)
Rocstor Data Recovery: Olee naghachi Data si Rocstor Draịvụ
Olee otú Naghachi ehichapụ ma ọ bụ Lost MXF Videos